यस्ता छन् गाजर खानुका फाइदै फाइदा | Himalaya Post
यस्ता छन् गाजर खानुका फाइदै फाइदा
Posted by Himalaya Post | १२ मंसिर २०७८, आईतवार ०६:३७ |
काठमाडौं – गाजर भान्सामा सधैँजसो प्रयोग भइरहने भएकाले यसबाट कोही पनि अपरिचित छैन । खानामा सलादको रुपमा, अचार बनाएर वा खाली चपाएर पनि हामीले गाजर खाइरहेका हुन्छौं ।
खासै महंगो नपर्ने, देख्दा पनि राम्रो र खाँदा पनि मीठो हुने भएकाले गाजर हाम्रो भान्साको अभिन्न अंग नै बनेको हुन्छ । हामीले गाजर त खाइरहेकै हुन्छौँ तर यसको फाइदाका बारेमा उतिसारो जानकारी नहुन सक्छ ।
गाजर कत्तिको हितकारी तरकारी हो त ? यसका फाइदा के के छन् ?
आँखाको शक्ति बढाउँछ, गाजर आँखाको स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । गाजरमा प्रसस्तै ‘बिटा क्यारोटिन’ नामक तत्व पाइन्छ जुसबाट भिटामिन ए बन्दछ । गाजरको नियमित सेवनले भिटामिन एको कमीले हुने रतन्धो लगायतका रोगको जोखिम कम हुन्छ र मान्छेको दृश्यक्षमता बढ्छ ।
बुढ्यौली रोक्छ, यद्यपि बुढ्यौली सर्वव्यापी सत्य हो । तर नियमित रुपमा गाजर खानाले कम उमेरमै बुढ्यौली देखिने समस्या कम हुन्छ । अर्थात् गाजरले मानिसलाई जवान बनाउँछ । गाजरमा हुने ‘एन्टीअक्सिडेन्ट’ नामक तत्वले कोषको क्षयीकरण रोक्छ र बुढ्यौलीका लक्षण कम गर्छ ।
छालाको चमक बढाउँछ, भिटामिन ए, एन्टिअक्सिडेन्ट लगायतका तत्वले छालालाई घामले डढ्नबाट बचाउँछ । गाजरको नियमित सेवनले छाला चाउरी पर्ने, सुख्खा हुने, धब्बा देखिने लगायतका समस्या कम हुन्छन् ।
क्यान्सरबाट बचाउँछ, अध्ययन अनुसार गाजरको सेवनले कलेजो, स्तन तथा आन्द्राको क्यान्सरको खतरा कम गर्छ । गाजरमा पाइने फालक्यारिनोल तथा फालक्यारिन्डायोल तत्वमा क्यान्सर प्रतिरोधी गुण हुन्छ ।
सुन्दरता बढाउँछ, अनुहारको सुन्दरताका लागि गाजरको लेप बनाएर मज्जाले लगाउने, केहीबेर राख्ने र पखाल्ने गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा अनुहारको छाला चमकदार बन्छ र विभिन्न खाले धब्बा पनि हट्छन् ।
घाउ निको पार्छ, गाजरलाई लेदो बनाएर चोटपटक वा घाउमा लेप लगाएमा घाउमा संक्रमण हुन पाउँदैन र घाउ छिटो निको हुन्छ ।
हृदयरोगबाट बचाउँछ, गाजरमा बिटा क्यारोटिन, अल्फा क्यारोटिन तथा ल्युटिन जस्ता तत्व पाइन्छ जसले मुटुका विभिन्न रोगको जोखिम कम गर्छ । गाजरको नियमित सेवनले रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा कम गर्छ । गाजरमा प्रसस्त फाइबर पनि पाइन्छ ।
स्वस्थ दाँत र गिजा, नियमित रुपमा गाजर खानेको दाँत, गिजा तथा मुख सफा हुन्छ । मज्जाले गाजर चपाएर खाँदा दाँत सफा हुन्छ र दाँतको बिचमा अड्किएका खानाका टुक्रा पनि निस्कन्छन् । गाजर खाँदा प्रसस्तै र्याल पनि निस्कन्छ । यो क्षारीय हुने भएकाले मुखमा अमिलोपनबाट उत्पन्न हुने जिवााणु कम गर्नुका साथै पाचन प्रक्रिया पनि ठीक राख्छ । मुख गन्हाउने, तथा दाँत किराले खाने जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन पनि नियमित रुपमा गाजर खानुपर्छ ।
शरीर सफा गर्छ, गाजरले सरीरमा भएका विषाक्त पदार्थ निष्काशन गर्न सहयोग गर्छ । गाजरमा पाइने भिटामिन ए ले विषाक्त पदार्थ निष्काशन गर्न कलेजोलाई सहयोग गर्छ । यसले कलेजोमा बोसो र पित्तको मात्रा घटाउँछ, साथै आन्द्रालाई पनि सफा गर्न मद्दत गर्छ ।
Previousआज आइतबार सूर्यदेवको पूजा गरी तेज प्राप्त गरौं
Nextमाओवादी केन्द्रको स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु
२४ असार २०७८, बिहीबार ०८:१९
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०७:५०
शिशु स्याहारका लागि सुत्केरी बिदा अब ६ महिनासम्म
२० श्रावण २०७४, शुक्रबार ०९:५३
नेपाली भूमिमा संरचना बनाउन एसएसएसबीको अवरोध, सीमास्तम्भ नै गायब !
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:१५
७३४ वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक : कसको कति जित
पोखरा महानगरमा आचार्यको जित सुनिश्चित
जनकपुरधाम उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साह विजयी
आज यी प्रदेशमा वर्षाकाे सम्भावना
खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ